ती गुरुशरण सदा- विचार - कान्तिपुर समाचार
हामी अग्लाअग्ला गुम्बजतिर बढी हेर्छौं, जगमा हजारौं इँटा पुरिएका छन् भन्ने भेउ नै पाउँदैनौं ।
वैशाख ९, २०७८ चन्द्रकिशोर
एक थिए, सामाजिक अभियन्ता गुरुशरण सदा । एउटा चम्किलो सूर्य, जुन यसै साता सिरहाको गोलबजारमा अस्तायो, मध्याह्नपूर्व नै । जीवन त्यसै पनि मूल्यवान् हुन्छ; तर जब व्यक्तिगत नभई एउटा समुदाय, एउटा संघर्षका लागि बाँचेको जीवन अकस्मात् अस्ताउँछ, एउटा रिक्तता उत्पन्न हुन्छ ।
नेपाली समाजले आत्मप्रवञ्चना र आत्मप्रशंसाको एकै खालको पीडा भोगिरहेको यो संवेदनहीन समयमा दलित संघर्षको एउटा कोसिस गर्नु सम्पूर्ण नेपाली जनसंघर्षका लागि एउटा अभिरेखांकनीय पक्ष हो । न्यायपूर्ण संघर्षका क्रममा प्राप्त, अरू समुदायका लागि सामान्य ठानिने उपलब्धिसमेत वञ्चित समुदायका सन्दर्भमा असाधारण मानिन्छ । त्यसैले कोही दलित डाक्टर बन्नु, कुनै दलितले कृति लेख्नु चानचुने प्राप्ति ठहरिँदैन । स्वतन्त्रता र मुक्तिको लडाइँका लागि त्यो पनि उत्प्रेरक बन्न पुग्छ ।
क्रान्तिको मार्ग किमार्थ सजिलो हुँदैन र क्रान्ति हतियारबाट मात्र पनि हुन सक्दैन । हतियारको क्रान्तिको जगमा रगतको आहाल हुन्छ । हतियारले व्यवस्था उलटपुलट गर्न सके पनि कतिपय सन्दर्भमा समाज वा व्यक्ति बदल्न सक्दैन । समाज बदल्न शान्तिपूर्ण संघर्ष नै प्रभावकारी देखिएको छ । यस्तोमा कुनै व्यक्तिको उठान पनि बृहत् जनसंघर्षकै अभिन्न हिस्सा बन्न पुग्छ । हामीलाई थाहा छ, क्रान्ति संशोधन वा सुधार होइन; आयामिक परिवर्तन ल्याउन सक्ने अभियान हो । वर्ग र वर्णभेद विरुद्धको संघर्ष आफैंमा एउटा सोपानको यात्रा हो, जहाँ भुइयाँबाट अन्त्यहीन आकाशसम्मको गमन चल्छ । गुरुशरणले मधेसी दलितभित्रको ‘मुसहर’ जातलाई आफ्नो आत्मसंघर्षले आधार प्रदान गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । विपन्न एवं वञ्चित मुसहर समुदायका गुरुशरण, जो आफैं इँटाभट्टामा मजदुरी गर्थे, त्यहाँबाट उठेर उच्च शिक्षा हासिल गरे । आफ्नी पत्नी शान्ति सदालाई पढाए । पत्नीलाई पनि आफ्नो सामाजिक–साहित्यिक यात्राको अभिन्न हिस्सा बनाए । चौखटबाहिर अधिकारको शंख फुक्न सजिलो छ, तर आफ्नै घरआँगनमा न्याय र समताको बाँसुरी र मादल बजाउन कम गाह्रो छैन ।
मुसहर दलितहरूमध्ये महादलित हो । मुसहरहरूको आफ्नै पीडागाथा छ । उनीहरू प्रायः भूमिहीन छन् र सामाजिक रूपमा बहिष्कृत छन् । मधेसी दलित जनसंघर्षभित्र मुसहरहरू अझै किनारामै छन् । उनीहरू राजनीतिक रूपमा कमजोर छन् । दलित राजनीतिको फाइदा केही जातिले मात्र लिइरहेका छन्। यस्तोमा निराशाको तुवाँलोभित्र आशाको किरण खोज्नैपर्छ, हताशाको धमिलो पानीभित्र धैर्यको चट्टान रोज्नैपर्छ । पोखरीमा फ्याँकिने ढुंगाले जसरी छालरूपी तरंग जन्माउँछ, त्यसै गरी विचारको प्रवाहले कुनै दिन स्वच्छ बतास बहाउँछ । गुरुशरणले आफ्नो समुदायमा मद्यपानविरोधी अभियान चलाए, पढेर नै असलमा लडिन्छ भन्दै त्यसका निम्ति लागिपरे । मुसहरहरूलाई संगठित गर्न खोजे । उनीहरूको माटोसँगको आबद्धता र निर्भरतालाई गौरवान्वित गर्न ‘माटो दिवस’ को थालनी गरे । उनी त्यही सुन्दर र सम्मानित भविष्यको पर्खाइमा आफ्ना सीमाहरूका साथ डटिरहे । स्वच्छ बतासको अभ्यर्थी बनिरहे ।
मुसहरको पहिचान र परम्पराको पुनर्जागरणको नाममा नेपालभित्रै ‘पूजावाद’ नचलाइएको होइन । दलित आन्दोलनको एक हिस्साले उसै पनि अवैज्ञानिक चेतनाबाट ग्रस्त सत्ताका लागि सम्झौतावादी गोरेटो समाउँदै आएको छ, जसले यसको गतिलाई मत्थर र भ्रमको जालोमा अल्झाइदिएको छ । परम्पराको निहुँमा चलाइने अभियान कमजोर र किनारा लाग्दै गरेको ब्राह्मणवादको पुनःस्थापनाको उपक्रम साबित भइरहेको छ । यसले मुसहरहरूको संघर्षलाई क्षति मात्र पुर्‍याएको छैन, निल्नसमेत थालेको छ । गुरुशरण यसबाट असाध्यै चिन्तित थिए ।
दलित आन्दोलन ‘पूजावाद’ भित्र कैद हुँदै गएको छ । मुसहर सशक्तीकरणको झ्याली पिट्नेहरू पूजावादी र कर्मकाण्डी बन्दै गएका छन् । कस्तो विडम्बना, जसलाई कथित धर्मको नाममा हजारौं वर्षदेखि गुलाम बनाइयो, तिनीहरूलाई नै सशक्तीकरण र पहिचान–मुखरताको नाममा पूजावादी–कर्मकाण्डी बनाइँदै छ । मुसहरहरू फेरि कसरी ठगिँदै छन्, फेरि वञ्चितिको अर्को अँध्यारो सुरुङतिर कसरी धकेलिँदै छन्, त्यो गुरुशरण बुझ्थे । र, यो रहस्यलाई उनी निरक्षर तर परिश्रमी मुसहरहरूमाझ तिनले बुझ्ने कथ्यमै प्रस्तुत गर्थे । राजनीति वा दाताहरूले मुसहरहरूमा व्याप्त प्रतिरोधको ऊर्जालाई आफ्नो स्वार्थअनुरूप प्रयोग गरिरहेका सन्दर्भहरू उनी आफ्ना रचनाहरूमा राख्थे । शीतलहरबाट सर्वाधिक सताइने मुसहरहरूको कथा–व्यथा कवितामा यसरी पोख्थे— शीतलहरले मेरो मात्र घर चिसिएको छैन सरकार/घरसँगसँगै मेरो मन र तन पनि चिसिएको छ/प्रकृतिका चिसा शीतहरूको लहरले मेरो परिवार/अनि मेरो जीवनको वरपर सबै चिसिएको छ/मैले खाने हरेक अन्नको भाग चिसिएको छ/सबैलाई ताप सम्प्रेषण गर्ने आगोको झिल्का पनि मबाट चिसिएको छ/र मलाई दिनबाट टाढिएको छ ।’ यी शब्दहरू त्यसै उब्जिएका होइनन् । उनले भोगेका दर्दनाक यथार्थ हुन् यी । परालको चटाइ ओढेर बाल्यकाल गुजारेका उनले जाडोको रात कस्तो हुन्छ भन्ने गहिरोसँग आत्मबोध गरेका थिए । त्यसैले उनका एकएक अक्षर उनकै भोगाइका वास्तविकता हुन् ।
अहिलेको समय नेपाली जनसंघर्षको परीक्षाको हो । भुइँतहमा क्रियाशील भइरहेकाहरूले नै यसलाई उत्तीर्ण गराउने हुन् । हामी अग्लाअग्ला गुम्बजतिर बढी हेर्छौं, जगमा हजारौं इँटा पुरिएका छन् भनेर भेउ नै पाउँदैनौं । छोटाछोटा प्रयत्न, ओझेलमा परेका पात्रहरू नै विराट् जनसंघर्षको आधार बन्न पुग्छन् । जसले नायक बनेर वाहवाही बटुलिरहेका हुन्छन्, तिनको पृष्ठभूमिमा अनेकौं काँधले टेवा दिइरहेका हुन्छन् । मुसहर जनसंघर्षका समस्याहरू के हुन् ? दलित आन्दोलनभित्र मुसहरको अस्तित्व कहाँ छ ? यस्ता जिज्ञासाहरूको चर्चा प्रायः समाज विज्ञानका जानकारहरूमाझ हुने गर्छ । तर चर्चा यसरी गरिन्छ कि समाजका अधिकांश मान्छेलाई यसबारे अवगत नै हुँदैन । कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ, समाज विज्ञानका जानकारहरूकै एउटा वर्गको कुरा अर्को वर्गले बुझ्न पाउँदैन । यस्तोमा समुदायविशेषकै मान्छेका सहज र सरल शब्दहरू बढी सशक्त र सार्थक हुने गर्छन्।
गुरुशरण कतिपय उपक्रममा अगाडि देखिन्थे, कतिपयमा सुविचारित ढंगले आफूलाई पछाडि राख्थे । तर, मुसहर संघर्ष चेतनाका यी सहयात्री अब कहिल्यै अगाडि देखिनेछैनन् । उनी चालीस वर्ष नपुग्दै बिते, मुसहर आन्दोलनमा एउटा रिक्तता पैदा गरेर । अधिकारकर्मी राजकिशोर रजकले गुरुशरणको मृत्युले उब्जाएका प्रश्नहरू भनेर मुहार पुस्तिकामा लेखे, ‘कोरोनाको दोस्रो लहरको समयमा गुरु बिरामी परेर उपचार गराउन जाँदा कोरोना जाँच किन गरिएन ? सिरहाको डाक्टरले कुन जाँचको आधारमा (कथित) उपचार गर्‍यो ? सरकारको कोरोना प्रोटोकल किन पालना भएन ? मृत्युपछि गरिएको परीक्षणबाट कोरोना पुष्टि कुनै डिजाइन त होइन ? कोरोनाले सबभन्दा बढी दलित–बहुजन प्रभावित भएका छन् । सरकारले यी समुदायको जनस्वास्थ्यको अधिकारलाई संरक्षण किन गर्न सकेको छैन ?’ यी प्रश्नहरू कोरोनाको कहरभन्दा कम खतरनाक छैनन् । हामी साँच्चिकै समता, स्वतन्त्रता र न्यायमा भरोसा गर्छौं भने रजकका लागि जवाफ–प्राप्तिको जमिन तयार गर्नैपर्छ । प्रदेश २ मा मुसहर ऐक्यबद्धताको गुरुशरणको प्रयत्न सदैव सम्झिरहनुपर्छ ।
हुन त गुरुशरणबारे यति श्रद्धाका शब्दहरू राख्दा कतिपय स्थापित दलित अगुवाहरूलाई रुचिकर नलाग्न सक्छ, उनीहरूले आफू कतै साँघुरिएको ठान्न सक्छन्, तत्कालका लागि कोही ‘टावर पर्सनालिटी’ नभेटिन सक्छन् तर के भुल्नु हुन्न भने हाम्रै वरिपरि त्यस्ता साधारण मानिस हुन सक्छन्, जसका साधारण प्रयासहरूको बाछिटाले थोरै बदलाव ल्याइरहेको हुन सक्छ । गुरुशरणको स्मृतिसँगै मुसहर आन्दोलनको चिरफार पनि जरुरी छ । दलित समुदायलाई देखाएर राजनीतिक पद प्राप्त गरेकाहरूमा दलित मुक्तिको चेत नहोला, कसैले आफ्नो करिअर उकासेर पनि सामुदायिक सशक्तीकरणका लागि शून्य काम गरेका होलान् । अहिले आफ्नो घरगृहस्थी जोगाउँदै पूरै परिवारलाई आन्दोलनको हिस्सा बनाउन सक्नु नै दलित संघर्षलाई बाँझो हुनबाट जोगाउनु हो । मुक्तिको संघर्ष शुभसाइत पर्खिनुपर्ने विषय होइन, निरन्तर चलिरहनुपर्ने प्रक्रिया हो ।
प्रकाशित : वैशाख ९, २०७८ ०८:३७
कुनै मायालु पतिले सपत्नी उभिएर ‘वी आर प्रेग्नेन्ट’ भन्नु अपराधै हो र ? के त्यस्तो लज्जाजनक काम हो र ?
वैशाख ९, २०७८ दीप्स शाह
हाल सामाजिक सञ्जालमा एउटा सुन्दर तस्बिर चर्चामा रह्यो । नेपाली सिनेजगत्की एक चर्चित नायिकाले आफू गर्भवती भएको खुसी व्यक्त गर्दै पोस्ट गरेको उक्त तस्बिरमा उनका पतिले पछाडिबाट बडो प्रेमले सहारा दिएर आफ्नी श्रीमतीलाई समातिरहेका देखिन्छन् भने नायिका गर्वानुभूतिले आह्लादित हुँदै आकाशतिर अनुहार फर्काएर मुस्कुराइरहेकी छन् ।
खुसी र आनन्दले भरपूर उक्त तस्बिर नियालिसकेपछि त्यसैमाथि आएका अनगिन्ती टीकाटिप्पणीतिर मेरा आँखा पुगे, जो तस्बिरसँगैको क्याप्सन ‘वी आर प्रेग्नेन्ट’ मा केन्द्रित थिए । लगभग दुईतिहाइ टिप्पणी नकारात्मक थिए, तीमध्ये कतिपय त अत्यन्तै भद्दा र लाजलाग्दा थिए । मलाई जति प्रसन्नता तस्बिरले दिएको थियो, त्योभन्दा हजार गुणा बढी पीडा ती भद्दा र सस्ता टिप्पणीले दिए, जसले गर्भावस्था र मातृत्वप्रति नै प्रहार गरेका थिए । ज्यादाजसो टिप्पणी नायिकाका पतिप्रति लक्षित थिए । ‘वी आर प्रेग्नेन्ट’ शब्दावली नै सबैजसो प्रतिक्रिया दिनेहरूको केन्द्रमा थियो । मानौं ‘हामी गर्भवती छौं’ भनेर ती दम्पतीले, खासगरी पतिचाहिँले असाध्यै लज्जास्पद काम गरिदिए ।
त्यो अतीव सुन्दर तस्बिर र त्यसमा आएका त्यतिविघ्न नकारात्मक टिप्पणीले मलाई आफ्नै विगतमा पुर्‍याए । कुनै बेला म आफैं पनि गर्भावस्थामा समसम्ती फुलेको पेट देख्नु र देखाउनु बडो लज्जाको कुरो मान्थेँ। पहिलोपटक कसैको बडेमानको पेट, त्यो पनि पतिचाहिँले खुलेआम सार्वजनिक पार्कमा बसेर सुमसुम्याउँदै, चुम्दै गरेको देख्दा म आफैं लाजले रातोपिरो भएर खुम्चिएकी थिएँ, मानौं त्यो गर्भवती मै थिएँ र त्यसो गरेर मैले ठूलै सामाजिक अपराध गरेकी थिएँ । जीवनका केही वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा, त्यसअघि कहिल्यै नदेखेका/नसुनेका/नभोगेका त्यस्ता कैयौं दृश्य र घटनाहरूसँग साक्षात्कार भएको थियो । तीमध्ये त्यो गर्भवती जोडीको त्यसखाले प्रेम–प्रकटीकरण पनि एक थियो । हुन त त्यसबेलासम्म म आफैं पनि मातृत्व सुख अनुभव गरिकन दुधेबच्चा छोडेर पैसो टिप्न इजरायलसम्म पुगिसकेकी एक परिपक्व आमा थिएँ । तर त्यतिन्जेल मैले बाँचेको सामाजिक परिवेश र चालचलनले गर्भवती महिलाको त्यहाँसम्मको उदाङ्गोपन, त्यो पनि सार्वजनिक पार्कमा सामान्य मान्न दिँदैनथ्यो । ओहो, त्यो त असम्भवको उपल्लो चुली भइहाल्यो मेरा लागि ! कहाँ यता आफैं गर्भवती हुँदा अरूले देख्लान् भनेर टनटनी पेट कसेर, सास तानेर त्यसमाथि भ्याङ्ले म्याक्सीले छोपेर कुनै ठूलै कसुरदारझैं खुम्चिएर लुक्दै हिँडेको अनुभव ! कहाँ ती आमा हुनलागेका विदेशी महिलाहरू तुम्बोजस्तो फुलेको पेट मुसार्दै साना कट्टु र गन्जी लगाएर पार्क र बजार डुलिराखेका ! त्यहींमाथि तिनका पतिले खुलेआम त्यही भुक्के पेट मुसार्दै चुम्मा खाँदै हिँडिरहेका ! म त तिनीहरूलाई देख्दैमा आफैं शरमले हायलकायल भइहालेँ । तर बस्दै जाँदा त्यसखाले दृश्य बाक्लै देख्न थालेपछि भने मलाई पनि सामान्य लाग्न थाल्यो ।
अलिपछि मिरी नाम गरेकी एउटी गोरी गर्भवतीसँग मेरो मित्रता भयो, जो बेलाबखत सडक र पार्कतिर देखिन्थिन् । कहिलेकाहीं उनका पति जोसेफ पनि पत्नीको फुलेको पेट मुसार्दै चुम्दै हिँडिरहेका देखिन्थे । तर तिनको त्यो कृत्य देखेर न कसैले जिब्रो टोक्थे न अचम्म मानेर खासखुस गर्थे । एकदिन मौका पारेर मैले मिरीसँग खसखस मेटाउन खोजेँ— त्यसरी कट्टु लगाएर फुलेको भुँडी देखाउँदै हिँड्दा लाज लाग्दैन ? झन् पतिले त्यसरी चुम्माचाटी गर्दै हिँड्दा अप्ठ्यारो लाग्दैन ? दुनियाँले कुरा काट्दैनन् ? उनले मतिर हेर्दै प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘आफू आमा हुँदा तिमीलाई चाहिँ लाज लाग्या थियो र ?’ मैले आफ्नो अनुभव र भोगाइ सुनेपछि मिरीले बडो विस्मय र अविश्वासको भावमा भनिन्, ‘त्यही भएर तिमीहरूकोमा आमा र बच्चाको मृत्युदर धेरै हुन्छ । सृष्टिको सुन्दरतम र बहादुरी काम हो, आमा हुनु भनेको । त्यही कामलाई पनि लाजको टुप्पामा राख्ने ?’ मभन्दा केही वर्ष सानी तर हुनैलागेकी आमाले मलाई मातृत्व र त्यसको महानताबारे लम्बेतान तर र गहन लेक्चर पनि दिइन्, ‘आफ्नो जिन्दगीलाई मृत्युको ढोकामा पुर्‍याएर, आफैंभित्र अर्को जीवन धारण गरी त्यसलाई सकुशल पृथ्वीमा ओराल्नु जस्तो महान् कामलाई किन लुकाउने ? एउटी नारीको जीवनकै सबैभन्दा नाजुक र संवेदनशील समयलाई किन झन् जटिल बनाइदिएर खुम्च्याउने ? अझै त्यस समयमा उसलाई पतिको साथ र सहाराको कति जरुरत हुन्छ ! त्यस्तो बेला पत्नीको साथ, भरोसा हुनुपर्ने उसको कर्तव्य नै हो । त्यो उमंग, आनन्द र कष्टलाई नजिकबाट नियालेर साझा गर्नु कसरी शरमको कुरा हुन्छ ? के तिमी त्यो अवस्थाबाट गुज्रिँदा तिमीलाई आफ्नो पति साथमा भइदेओस् भन्ने लागेको थिएन ?’ सन्तान जन्माइसकेर त्यो प्रसव–कष्ट सहिसकेर पनि मैले गर्भावस्थाको संवेदनशीलतालाई त्यसरी त हेरेकै पो रहिनछु । हुन पनि आफ्नो शरीरभित्र अर्को जीवात्मा धारण गरेर अनेक कष्ट सहंँदै मृत्युसँग लाप्पा खेल्दै आफ्नै रगतमासुको डल्लोलाई धरतीमा ओराल्नु चानचुने कुरो होइन ।
काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालको म्याटर्निटी वार्डमा प्रसवको भयानक त्यो पीडाले अत्तालिएर मैले नर्सलाई भनेकी थिएँ— यदि म पीडाले मरिहालेँ भने मैले जन्माउने बच्चालाई पनि मारिदिनु ल !’ त्यसबेला मलाई लागेको थियो— मै मरेँ भने नवजात शिशु कसरी हुर्केला यो दुनियाँमा, ‘आमा टोकुवा’ को ठप्पा टुहुरो निधारमा बोकेर ! ओहो, कस्तो डरलाग्दो कामना थियो मेरो ! कति त्रस्त थिएँ म ! त्यत्रो पीडाबाट गुज्रेर भुइँमा ओराल्दिसकेको बच्चालाई काखमा राखेर म्वाइँ खानुजस्तो सजिलो हो, गर्भावस्था पार गर्नु ? होइन भने त्यो सारा कष्ट र दर्दको समयमा ‘म पनि साथै छु, तिमी एक्ली छैनौ, तिम्रो पीडा म पनि अनुभव गरिरहेछु, जसको कारक म पनि हुँ’ भनेर माया र आफ्नोपन अनि साझेदारीको हकले, कर्तव्यले कुनै मायालु पतिले सपत्नी उभिएर ‘वी आर प्रेग्नेन्ट’ भन्नु अपराधै हो र ? के त्यस्तो लज्जाजनक काम हो र ?
हामी यस्तो समाजमा बाँचिरहेछौं, जहाँ छाउको नाममा, दाइजोको नाममा, छोरी भ्रूणको नाममा, बलात्कारको नाममा, कथित तल्ला जातको नाममा, गरिबी र अभावको नाममा, माथिसम्मको पावर र पहुँचको नाममा मानवसमाजकै कलंकित, दुर्गन्धित र सर्वथा वर्जित कुकृत्यको दैनिक साक्षी हुनु परिरहेको छ । लाजले मरेतुल्य हुन यिनै विषय काफी छैनन् ? यी सबमा हामी लाजै पचाएर हाँसिरहेछौं त एउटा प्रेमिल दम्पतीले निष्कलंक आफ्नो खुसी सार्वजनिक गर्दा किन यत्रो आपत्ति ? होला, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अनेकानेक बेथितिले बिथोलिएर हाम्रो पुस्ता सर्वाधिक निराश छ । तर ती सारा नैराश्य र कुण्ठा पोख्न हामी कसैको अलौकिक खुसीमा मनलाग्दी हिलो छ्याप्न स्वतन्त्र छौं र ? कुण्ठा या अर्ती–उपदेशको नाममा त्यसरी मातृत्व र वात्सल्यमाथि नै भद्दा मजाक गर्ने अधिकार कसले दियो हामीलाई ?
प्रकाशित : वैशाख ९, २०७८ ०८:३५